Haddii aad tahay qofka kibirsan ee casriga socda laba hawlgalka nidaamyo kala duwan oo ay ka mid yihiin Windows iyo macruufka, aad la kulmi karto hawl aad u dhib xogta ka telefoonka Windows gudbaayo iPhone. Kala beddelashada xogta u dhexeeya labada qalabka socda OS ee kala duwan madal uma fududa sida ay tahay markii aad qabtid qalabka la caadiga ah madal. Maqaalkani waxa ujeedadiisu tahay si ay kuugu hagaan labada waddo oo fudud oo aad raaci karaan si ay u gudbiyaan xogta lagu kaydiyaa telefoonka Windows sida Nokia Lumia in aad macruufka qalabka, tusaale ahaan iPhone.
Waa in aad ku tiirsan yihiin barnaamijka dhinac saddexaad / adeeg online / website la mid ah sida Outlook, qaab file CSV, Google Xiriirada, iwm
Waxaad la kulmi kartaa arrimaha halka macluumaadka wareejinta ka phone HTC in BlackBerry via Bluetooth.
Part1: wareejinta xogta wirelessly via Microsoft ID
Data Transfer Isticmaalka PhoneCopy: Part2
Taleefanada Windows sida Nokia Lumia ku xiran tahay ID Microsoft ah in ay dib u kor xog muhiim ah in aad sida xiriirada, fariimaha qoraalka ah, jadwalka, iyo doorbidida qalab. Marka aad qaybiyay xogta ku saabsan smartphone Nokia Lumia, waxaad ku dari kartaa isla cinwaanka email Microsoft aad iPhone ka dibna u hagaagsan xogta waa in. Marka la eego hoos ku qoran yihiin tallaabo-tallaabo tilmaamo ku saabsan sida ay u gudbiyaan xogta via ID Microsoft:
Samee xisaab on Outlook.com.
1. Open www.outlook.com on browser web on your casriga ah ama PC.
2. Marka aad wareejiyey website-ka, tuubada Saxiix doorasho ka dhinaca kore ee midig-
3. Geli macluumaadka looga baahan yahay in ay beeraha u heli karaa si ay u abuuraan xisaab.
Hagaagsan xogta ku saabsan Nokia Lumia in account Outlook.com ka Microsoft ee.
1. Switch on your smartphone Nokia Lumia.
2. Scroll dhex screen Home ah in la helo Settings doorasho.
3. Marka ku yaal, tuubada Settings doorasho si aad u furto.
4. On the Settings uu furmo, hel iyo tubbada email + xisaab doorasho si aad u furto.
5. Laga soo bilaabo suuqa kala furay, tuubada add xisaab doorasho.
6. Ka dib markii ADD AN ACOOUNT uu furmo suuqa furmo, ka jaftaa Outlook.com ka fursadaha la heli karo.
7. Tubada badhanka Connect ka geeska bidix hoose ee suuqa kala OUTLOOK.COM ah.
8. Marka aad wareejiyey website outlook.com ah, oo ah berrimmadii heli karo, geli aqoonsiga aad Microsoft account in aad abuuray ka hor.
9. tuubada Log in button marka loo sameeyo.
10. Sug ilaa xog ku saabsan Nokia Lumia si toos ah uu beehsa la account Muuqaalka aad.
Dejinta xogta ka account Muuqaalka si aad u iPhone.
1. Switch on your iPhone oo ugu rogto iyada oo shaashadda Home si loo helo ka Settings doorasho.
Fiiro gaar ah: Hubi in qalab aad ku xiran internetka.
2. Marka uu ku yaalaa, ka jaftaa si loo bilaabo Settings app.
3. furay Settings uu furmo, tuubada Mail, Xiriirada, Kalandarada doorasho.
4. Ka dib markii Mail, Xiriirada, Kalandarada uu furmo suuqa furmo, tuubada Account Add Add doorasho Account hoos xisaab qaybta.
5. Laga soo fursadaha la heli karo, tuubada Tallaabada laba Outlook.com.
6. Marka Outlook uu furmo suuqa furmo, geli aqoonsiga account Muuqaalka, iyo ka jaftaa Next dhankiisii ​​top-midig.
7. Sug ilaa qalab aad cadeyso xisaabtaada.
8. Marka faahfaahinta akoonka aad xaqiijin oo liiska nooca xogta transferrable bandhigo shaashadda, ka jaftaa in ay simbiriirixan wareegto si xaq ah ee xog ah in aad rabto in aad soo dhoofsadaan.
Fiiro gaar ah: Ka dib markii aad simbiriirixan wareegto si ay u gudbiyaan Xiriirada ah, iPhone siinayaa ikhtiyaarka ah in ay sii xiriirrada in ay horeba u kaydiyaa qalab aad ama iyaga tirtirto wadajir hor galinta kuwa cusub oo ka xisaab Muuqaalka aad. Waxaad dooran kartaa doorasho kasta sida aad looga baahan yahay.
9. Marka aad soo xulay xogta in aad rabto in aad soo dhoofsadaan, tuubada Save button ka dhinaca kore ee midig.
10. Sug ilaa xogta uu keeno in aad iPhone.
Waxaad ku wareejin kartaa xogta aad lacag la'aan ah iyadoo la isticmaalayo habkan oo looga baahan yahay oo kaliya waa isku xirnaanta Internet.
Oo aadna ku badbaaddeen ka soo degsado codsi saddexaad si ay u gudbiyaan xogta aad.
Waxaad si fudud wareejin karaan xogta wirelessly aan u baahan in aad PC ka dhigi doonaa sida a go-u dhexeeya
Waa geedi socod lagu Cunidda ku lumo.
Waxaad kuma wareejin karaan sawiro iyo files warbaahinta by socda habkan.
Iyadoo PhoneCopy aad si fudud u dhoofin karaan xogta ka Nokia Lumia in server PhoneCopy ah, oo ka dibna soo dhoofsadaan xogta ka server PhoneCopy si aad qalab cusub macruufka.
Si ay sidaa u sameeyaan, waxaad u baahan tahay:
A diiwaan account PhoneCopy.
1. your computer, furo browser web oo aad doorato wax oo taga si https://www.phonecopy.com/en/.
2. Laga soo bilaabo qaybta midig ee bogga internetka furay, guji DIIWAANGELINTA NOW.
3. On the DIIWAANGELINTA page, dad Beerihii heli karaa qiimaha saxda ah oo guji WAD ka hooseysa.
4. Raac tilmaamaha ku-screen intaas ka dib si aad u dhamayso account abuurka.
Fiiro Gaar ah: waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u bilowdo xisaabtaada isticmaalaya mail xaqiijin in aad hesho lahaa halka dhamaystirka nidaamka xisaabta abuurka ah.
App PhoneCopy ku saabsan telefoonka Windows.
1. Power on your smartphone Nokia Lumia.
Fiiro gaar ah: Hubi in taleefanku xiran yahay internetka.
2. Laga screen Home ku, hel oo ka jaftaa Store icon in la furo App Windows ka Store.
Fiiro gaar ah: Waa in aad isticmaasho xisaabtaada Microsoft inay la soo wareegto-in si Windows Store hor telefoonka kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi barnaamijyadooda ka.
3. Marka aad ku dukaanka interface, raadiyo iyo tubbada PhoneCopy app
4. suuqa kala socda oo u muuqata, ka jaftaa rakib Pato rakibi PhoneCopy ah ee aad taleefan Windows.
Ka dib marka aad si guul leh ku rakiban ayaa PhoneCopy aad Nokia Lumia, hadda waa markii si ay u dhoofiyaan oo dhan xiriir si aad u server PhoneCopy ah. Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo raacaya taallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 01: xogta dhoofinta in server PhoneCopy ah.
1. telefoonka Windows, hel oo ka jaftaa si loo bilaabo PhoneCopy app.
2. interface soo bandhigay, oo ah berrimmadii heli karo aad aqoonsiga account PhoneCopy (username iyo password) in aad loo isticmaalo si ay u abuuraan PhoneCopy akoonka hore.
3. Marka sameeyo, tuubada dhoofinta in phonecopy.com button oo sug ilaa aad xiriirka la leedahay oo dhan dhoofiyaa server PhoneCopy ah.
Tallaabada 02: xogta Import si iPhone ka server PhoneCopy ah.
Fiiro gaar ah: Hubi in aad telefoonka ku xiran internetka.
2. Laga screen Home ku, ay helaan iyo tubbada icon Apple App Store.
Fiiro gaar ah: Hubi in aad saxiixday-in si App Store isticmaalaya ID Apple aad.
3. Raadi, helo, download, iyo rakibi PhoneCopy app aad iPhone
4. Marka lagu rakibay, tuubada PhoneCopy icon ku saabsan qalabka macruufka u bilowdo barnaamijka.
5. Markii la weydiiyay, waxay bixiyaan aqoonsiga PhoneCopy mid ah in aad loo isticmaalo in lagu dhoofiyo xogta ka phone Nokia Lumia in tallaabo hore.
6. Ka dib markii aad saxiixday-in si account PhoneCopy aad on your iPhone, riix waafajinta badhanka si ay u dajiyaan oo dhan xogta ka server PhoneCopy in ay cusub iPhone.
Inkastoo PhoneCopy qabtaan shaqo aad u weyn marka ay timaado wareejinta macluumaadka u dhexeeya telefoonada laga soo dhufto ee kala duwan, app wuxuu la iman doonaa a faa'iidada iyo khasaaraha yar oo ka mid ah:
Diiwaangelinta iyo isticmaalka PhoneCopy waa lacag la'aan.
PhoneCopy dib kartaa ilaa aad dhacdooyin taariikheed, SMS, hawlaha iyo qoraalada iyo kaa caawin kara inaad iyaga soo dhoofsadaan taleefanka ah oo kala duwan (sida caadiga ah ku iPhone).
Kaliya ilaa 500 xiriirada, SMS, hawlaha iyo qoraalada lagu synched karaa marka aad isticmaalayso version aasaasiga ah (account free) ee PhoneCopy. Si aad ka saarto meesha xanibaada this, waa in aad soo iibsato version Premium taas oo PhoneCopy eedeeyo $ 25 sannad walba ka.
Xogta loo xafidayaa waa auto-tirtiray ka server PhoneCopy ka dib markii muddo hal bil ah marka la isticmaalayo version aasaasiga ah, oo 1 sano ka dib marka la isticmaalayo version Premium.
Marka laga xaqiiqada ah in xalal badan oo bilaash ah, halkaas waxaa kaa caawin kara in aad ka Nokia Lumia si iPhone wareejiyo xogta aad, adeegyada bixiyo mar walba gacanta sare marka ay timaado bixinta socdaalka kaaftoomi-free u dhexeeya qalabka cross-madal.
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Lumia in macruufka Devices